LeviarCoin စျေး - အွန်လိုင်း XLC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို LeviarCoin (XLC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ LeviarCoin (XLC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ LeviarCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $23 908.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ LeviarCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
LeviarCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
LeviarCoinXLC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0051LeviarCoinXLC သို့ ယူရိုEUR€0.00435LeviarCoinXLC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00391LeviarCoinXLC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00468LeviarCoinXLC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.046LeviarCoinXLC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0324LeviarCoinXLC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.114LeviarCoinXLC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0191LeviarCoinXLC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00679LeviarCoinXLC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00714LeviarCoinXLC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.114LeviarCoinXLC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0395LeviarCoinXLC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0274LeviarCoinXLC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.38LeviarCoinXLC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.859LeviarCoinXLC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.007LeviarCoinXLC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00776LeviarCoinXLC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.159LeviarCoinXLC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0354LeviarCoinXLC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.543LeviarCoinXLC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩6.04LeviarCoinXLC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦1.94LeviarCoinXLC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.373LeviarCoinXLC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.141
LeviarCoinXLC သို့ BitcoinBTC0.0000005 LeviarCoinXLC သို့ EthereumETH0.00001 LeviarCoinXLC သို့ LitecoinLTC0.00009 LeviarCoinXLC သို့ DigitalCashDASH0.00006 LeviarCoinXLC သို့ MoneroXMR0.00006 LeviarCoinXLC သို့ NxtNXT0.413 LeviarCoinXLC သို့ Ethereum ClassicETC0.000756 LeviarCoinXLC သို့ DogecoinDOGE1.51 LeviarCoinXLC သို့ ZCashZEC0.00007 LeviarCoinXLC သို့ BitsharesBTS0.196 LeviarCoinXLC သို့ DigiByteDGB0.168 LeviarCoinXLC သို့ RippleXRP0.0182 LeviarCoinXLC သို့ BitcoinDarkBTCD0.000179 LeviarCoinXLC သို့ PeerCoinPPC0.0172 LeviarCoinXLC သို့ CraigsCoinCRAIG2.37 LeviarCoinXLC သို့ BitstakeXBS0.222 LeviarCoinXLC သို့ PayCoinXPY0.0907 LeviarCoinXLC သို့ ProsperCoinPRC0.652 LeviarCoinXLC သို့ YbCoinYBC0.000003 LeviarCoinXLC သို့ DarkKushDANK1.67 LeviarCoinXLC သို့ GiveCoinGIVE11.25 LeviarCoinXLC သို့ KoboCoinKOBO1.18 LeviarCoinXLC သို့ DarkTokenDT0.0047 LeviarCoinXLC သို့ CETUS CoinCETI15